Diyopost.com :: माओवादीमा फेरी ‘श्रीमतीकाण्ड’: यी हुन् ‘आफ्नै गृहिणी’लाई राष्ट्रियसभामा उठाउने माओवादी नेता ! माओवादीमा फेरी ‘श्रीमतीकाण्ड’: यी हुन् ‘आफ्नै गृहिणी’लाई राष्ट्रियसभामा उठाउने माओवादी नेता ! - Diyopost.com
माओवादीमा फेरी ‘श्रीमतीकाण्ड’: यी हुन् ‘आफ्नै गृहिणी’लाई राष्ट्रियसभामा उठाउने माओवादी नेता !
काठमाडौं । आफ्ना श्रीमतीलाई सांसद तथा राजनीतिक नियुक्ती दिलाउनेमा माओवादी केन्द्र पहिलो नम्बरमा दर्ज भएको छ । केही महिनाअघि मात्रै नेताका श्रीमती तथा बहिनीलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधी सभाको सदस्य बनाएर विवादित बनेको माओवादी भित्र फेरी अर्को श्रीमती काण्ड मच्चिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अन्य योगदान गरेका कार्यकर्ता हुँदा हुँदै एक नेताले आफ्नै गृहिणी पत्निलाई र अघि सारेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रदेश १ का संयोजक सावित्रि कुमार काफ्ले ‘समर’ले राजनीतिमा समेत समलग्न नभएकी पत्नि विना पोखरेललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएका हुन् । माओवादी केन्द्रको भागमा एक सदस्य मात्रै परेपछि उनले आफ्नी गृहणी पत्निलाई अघि सारेपछि माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका छन् ।
‘आफ्ना दुई छोरा जनयुद्धमा गुमाएकी आमालाई पछि पार्दै प्रदेश नम्बर १ मा आफ्नी गृहणीलाई राष्ट्रिय सभामा टिकट दिलाउन सफल हुनु भएकोमा प्रदेश संयोजक कमरेड समरलाई हार्दिक बधाई छ,’ विद्यार्थी नेता विरेन्द्र बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
तिजको दर खाँदा सुर्खेतमा पनि ९ जना बिरामी !
सुर्खेत, भदौ २५ । तीजको दर खाँदा आइतबार बेलुका सुर्खेतमा नौ जना बिरामी परेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ दौलतपुर सुर्खेत ...
गणतन्त्रमा ‘केरा’का कुरा !
काठमाडौँ । माओवादी जनयुद्धका क्रममा ७ बर्ष जेल परेका तिलक शर्माले चार बर्ष पहिले गज्जबको योजना सुनाए । सादगी नेताको ...
कहाँ पुग्यो एमाले–माओवादी एकता ?
— मनहरि तिमिल्सिना एमाले-माओवादी बीच पार्टी एकताको प्रयास अघि बढेपछि राजनीतिक बजारमा अनेकौं तरङ्ग देखिन थालेका छन् । निर्वाचनपछि पार्टी ...
सरकारले ‘एकलौटी’ प्रदेश राजधानी तोकेपछि ‘बबाल’ : महराले भने,‘तुरुन्त सच्याओस्’
काठमाडौं । सरकारले अस्थायी राजधानी तथा प्रदेश प्रमुख तोकेपछि राजनीतिक बजार तातेको छ । राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले सरकारले गरेको ...
प्रदेश तथा प्रतिनिधिका सम्पुर्ण क्षेत्रको मतगणना सकियो, समानुपातिकको ५४ लाख मत गनियो (विवरणसहित)
काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका सम्पुर्ण निर्वाचन क्षेत्रहरुको मतगणना सम्पन्न भएको घोषणा गरेको छ । बुधवार अन्तिम ...
(बहस) – दलित दृष्टिमा नेपालको संविधान : भाग १
अधिवक्ता, मोहन साशंकर नेपालको संवैधानिक र कानुनी इतिहासमा नागरिक हक–अधिकार उल्लेख गर्ने प्रचलन/अभ्यास धेरै पुरानो र नौलो होइन । ...
धादिङ चुनावका घाइते भन्छन,‘बुद्धिमान झरेपछि नयाँनयाँ मान्छेले, हामीमाथि ढुङ्गामुढा गरे’
मेरो नाम अभिषेक तामाङ हो । खनियावास गाउँपालिका २ झार्लाङमा पर्छ । निर्वाचनको अघिल्लो दिन ९ गतेसम्म शान्तिपूर्ण वातवारण नै ...
किन बन्दैन एकिकृत वामपार्टी ? माओवादी नेता छत्र श्रेष्ठले अठार वर्षअघि गरेका विश्लेषण
काठमाडौँ । यतिखेर देश निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ । वाम गठबन्धनको नाम लिएर एमाले तथा माओवादी लगायतका दलहरु संयुक्त रुपमा ...
वाम गठबन्धन : ‘मेरो पार्टीको हात्ति नेता होस् या आफ्नै बाउ, मलाई यो निर्णय ठीक लागेन’
अहिलेसम्मको मेरो सामाजिक/राजनैतिक परिचय अहिलेको माओबादी केन्द्रका कारण नै बनेको छ । म हालसम्म यही पार्टीमा छु । अपितु, ...